Hery - Tsiky dia ampy | Jolay 2011 |
Io famadihana io
2011-07-26 @ 07:04 in Izaho sy ny ahy
Zavatra iray izay iainan'ny tena mivantana mikasika ity resaka famadihana ity no nanosika ahy hanoratra sy hamerina handinika indray hoe inona marina no mbola mahatonga ny Malagasy hamadika. (tohiny)
Nampidirin'i hery | 16 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Mino aho fa efa betsaka ny olona voan'izany hoe nisy olona nitokisanao dia voatery nilaozana. Indrindra moa raha olona nianteherana hitari-dalana sy hiaraka aminao amin'ny sarotra... rehefa maizina iny ny andro. Izaho voa tamin'ny asabotsy. Tamin'ny asabotsy alina, efa hadiva hisasak'alina aho dia nanapa-kevitra fa tsy hiaraka intsony amin'i ra-Catherine. (tohiny)
2011-07-07 @ 05:56 in Izaho sy ny ahy
Efa ela aho no tsy niresaka politika, ary mbola tsy hiresaka politika koa androany. Ahoana tokoa moa no hiresahana politika raha toa ka vao miteny fotsiny ianao hoe resaka politiika ity dia tsy misy mamaky avy hatrany? Ny sasany aza vao hanomboka hifandray fotsiny ianao dia avy hatrany dia misakana hoe aza asiana resaka politika mihitsy an. Ilay bandy akamako mpanoratra lahatsoratra an-gazety mba nasaiko nitantara ny zava-misy sy ny toe-draharaha any Madagasikara dia nanda avy hatrany hoe "Izaho aloha tsy hanoratra mikasika politika mihitsy". Ry Ikalamako izany tsy te hiherika mihintsy raha vao misy hoe Rav... na Raj... (tsy hosoratako manontolo sao tsy mamaky eo koa izy) any anaty lahatsoratra.
Fa dia naninona loatra ny politika?
Ny politika no zavatra anisan'ny nahaliana ahy indrindra tamin'ny taona vitsivitsy nanaovako Filozofia. Io ihany tsinona no taranja hitako hoe mahakasika mivantana ny fiainako sy ny manodidina ahy. Resaka momba izany rahateo ny tena politika. Fitantanana tanàna (Polis), fandrindrana ny fiaraha-monina. Ny hoe mandrindra dia mandamina izay mikorontana sy tsy marina. Izany hoe hamarinina ho tsy misy avo sy iva, tsy hisy tombo sy hala. Izay no nitiavako politika.
Toa ny manao fanorona dia mahafinaritra ilay politika. Raha hijery sy handamina ny "avo sy iva" izany mantsy dia mila manana fijery ankapobeny aloha, izany hoe mahita ny rehetra, diia avy eo mahalala ny antsipirihany. Eo no mampiasa ilay teti-panorona isan-karazany hoe ahoana no hampakarana ny "iva" ka tsy hisian'ny elanelana be loatra eo amin'ny "avo sy iva". Resaka tena mikasika ny andavanandro izany ny politika fa tsy resaka maha monaina.
Ny olana angamba dia satria tsy manao politika akory ireo mpanao politika. Toa manao izay ham-panankarena ny tenany fotsiny ka manitsaka ny ambany sy "iva" mba hiakarana ambony amin'ny "avo". Mifanohitra tanteraka amin'ilay mandamina. Dia izay mahery sy be vola no lasa filoha.
Tonga amin'ny tanjony izao ny mpanao poltika sandoka. Tsy misy miresaka politika intsony. Tsy misy mitsikera ny "avo" sy miantra ny "iva" intsony. Lasa samy maka ho azy sisa. Mirehareha ery hoe tsy manao politika kanefa latsaka ao am-bovon'ny be polifika. Manjary mankaksitraka ilay tsy firindrana.
Tsy maninona, aleo samy mody fanina. Tsy maintsy hikorontana ihany rehefa lasa avo loatra ny "avo" ka lasa iva loatra ny "iva". Hiseho amin'izay ny tena mpanao politika "mpandrindra" sy "mpanamarina"